Fifidianana ben’ny tanàna Raikitra ihany amin’ny 27 novambra
Hotontosaina ny 27 novambra izao ny fifidianana izay ho ben’ny tanàna sy ireo mpanolotsainan’ny tanàna manerana ny Nosy, araka ny tapaka tao anatin’ny filankevitry ny governemanta,
Tetibolan’ny fifidianana Vonona hampihatra ny politikam-pitsitsiana ny CENI
“Miankina amin’ny fanapahan-kevitra avy amin`ny governemanta ny fanapahana ny tetibola ilaina amin`ny fanatanterahana ny fifidianana ben` ny tanàna”, hoy ny filoha lefitry ny CENI, Thierry Rakotonarivo.
Imbiki Herilaza “Tokony ho olom-boafidy no mitarika ny fanoherana”
Nitondra ny heviny mahakasika ny lalàna mifehy ny fanoherana ny mpahay lalàna, Imbiki Herilaza.
Marc Ravalomanana Voafidy ho filohan’ny Rodoben’ny mpanohitra
Nitsangana ny « Rodoben’ny Mpanohitra ho amin’ny Demokrasia eto Madagasikara » na ny RMDM, araka ny tapaka nandritra ny fivoriana lehibe teny Ivandry ny alarobia 14 aogositra teo.
Andry Rajoelina Tratry ny vely kobay, mikatso ny IEM
Nampahafantarina nandritra ny ny filankevitry ny minisitra ny alarobia lasa teo fa tsy maintsy ampifanarahana amin`ny velirano natao ny fametrahana ny tetibolam-panjakana 2020 izay tokony hiompana amin`ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka amin`ny lafiny sosialy sy ny sehatry ny fambolena.
Lehiben’ny mpanohitra “Hajao fotsiny ny lalàna efa misy dia izay”
Nitondra ny heviny mikasika ny adihevitra momba ny lalàna mifehy ny mpanohitra sy ny lehibeny ireo olon-tsotra nanaovana ny fanadihadiana.
Depiote Alain Ratsimbazafy “Ny lalàna 2011-013 ihany no fantatray !”
Volavolan-dalàna mikasika ny fanoherana ety anivon’ny antenimieram-pirenena no dinihin’ireo depiote amin’izao fotoana izao, raha ny fanazavan’ny depioten’Atsimondrano, Alain Ratsimbazafy.
Tsy miandry ny ankatoky ny fotoam-pifidianana tahaka izao ny tenany raha ny nambarany vao manambitamby mpampianatra na maka ny fon’ny vahoaka fa efa niasa ary mbola hiasa hatrany. Anisan’ny asa vitany ny fanalana ireo fako nivangongo tao Ivato sy ny nahazoany fiarabe iray vaovao hitatitra izany. Nisy koa ny lalana mirefy 15 km natao rarivato sy tara ka voakasika avokoa ny tany anelakela-trano sy ny tany an-tanimbary. Tsy latsa-danja amin’ireo ny CSB II roa vaovao, ny tsena, ny fandraisan’ireo zokiolona ao Ivato vola fisotroan-dronono, ny EPP roa vaovao ao Antanambao sy Ilaivola, ny tranompokonolona roa vaovao ihany koa ny fampidirana jiro sy rano, ny fanampiana ny mpampianatra…. Nomarihin’ingahy Ben’ny tanàna fa vola toy ny nampiasain’ireo mpitantana ny kaominina Ivato teo aloha ihany no nampiasainy nanaovana izany koa anjaran’ny vahoaka ny mitsara.